Kuze kwaba seminyakeni embalwa edlule, uwoyela irayisi bran, izakhiwo ezuzisayo okuyinto neze kunabayeni omnqumo, ummbila noma Sesame, kwaba athandwa kakhulu kuleli zwekazi lase-Asia. Kodwa namuhla, it is kabanzi ekuphekeni yasekhaya, imithi ngisho izimonyo. Ngemva kokufunda lesi sihloko, uyakuqonda kuyasiza kangaka lo mkhiqizo.
A amazwi ambalwa mayelana nobuchwepheshe
Kufanele kuqondwe ukuthi ukwenza amafutha yemifino (irayisi) kuyinto cishe engenakwenzeka ekhaya. Lo mkhiqizo esingavamile ngokulambisa lizwakale isici iphunga kuyinto ketshezi oily ophuzi luhlaza. Lithathwe hhayi kusukela okusanhlamvu kakhulu futhi bran, okuyinto sloughed off ngaphambi kokusipakisha. Phakathi ukukhiqizwa ungqimba ophuzi okusagolide, elise phakathi esivikelo core ifilimu, ngaphansi ukuphokophela amakhaza ukuphokophela.
Lokho kuyingxenye amafutha irayisi?
Lo mkhiqizo eyigugu ubhekwa omunye wemithombo engcono izakhi eziningi, kuhlanganise amavithamini A, E, B, no-PP. Ngu Isifaniso namanye amafutha yemifino, ligcwele ama-fatty acid ezifana oleic acid (cishe ngo-46%), linoleic (36%) kanye linolenic acid (ngaphansi kuka-1%). Ngaphezu kwalokho, liqukethe isamba elanele squalene, tocopherol, gamma-tocotrienol futhi orizonola. Zonke lezi zinto ezibhekwa Antioxidants ezinhle okuyinto ukuvikela umzimba womuntu kusuka emiphumeleni elimazayo radicals khulula.
Ngaphandle uwoyela irayisi, ogama izakhiwo ngenxa wokuqukethwe lelisetulu stearic acid palmitic acid, kunomphumela ezuzisayo phezu amazinga egazi cholesterol. Futhi umphumela anti-inflammatory ngenxa yokuba khona lichaza ekwakheni umkhiqizo phytosterol. Lezi izinto hhayi kuphela ukulwa carcinogens kodwa futhi neqhaza sezindawo okuzivuselela kwesikhumba, ukuzinza yamanzi ukulinganisela ukuqinisa cell ulwelwesi. Kubalulekile futhi ukuthi azikho amanyela emkhandweni yokwakheka umkhiqizo, okungase kubangele ukusabela nomzimba.
uwoyela Ilayisi: izakhiwo ewusizo kanye contraindications
Lo mkhiqizo has a Ukwakheka esiyingqayizivele, eyenza ihluke kwezinye amafutha zemifino. Kunconywa ukusebenzisa kubantu abaphethwe isikhumba ahlukahlukene, umdlavuza nezifo zenhliziyo. It kuvimbela ukuthuthukiswa izimila benign nesibulalayo, kubambezela ukuguga kwesikhumba wakwenza ngokuzimisela, wehlisa ikholesteroli, sivuselela kwegazi futhi kuqinisa amasosha omzimba.
Namuhla abantu abaningi zisebenzisa amafutha irayisi bran. Izimo ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo liyigugu kakhulu anqunyelwe ukungabekezelelani ngabanye. Futhi, ke akudingekile ukuze ungeze ekudleni abantu abanezinkinga nge ipheshana wokugaya ukudla. Ngamanye amazwi, ngeke sisetshenziswe phakathi pancreatitis acute, cholecystitis, kolwelwesi kanye isilonda peptic.
Njengoba lisetshenziswa ukupheka?
Qualitative uwoyela irayisi, contraindications izakhiwo ewusizo zazo echazwe ngenhla nje, has a ukungaguquguquki obukhulu viscous. Kungaba kakhulu uthuthukise ukunambitheka bhaka salads. Ngenxa yokuthi ngemva kokuba asihlali esivuthayo uzinze, ngenkuthalo esetshenziswa ukuthosa inyama.
Phakathi kwezinye izinto, lokho kubhekwa njengokuzijabulisa umkhiqizo wezokudla. Caloric uwoyela irayisi kuyinto kilojoule 884 kuphela / 100 amagremu.
Ngenxa izakhiwo esiyingqayizivele kwalo mkhiqizo ke ngenkuthalo futhi ngempumelelo esetshenziselwa ukwelapha izifo eziningi. Ngakho, uwoyela irayisi uzabalaza immunomodulating, Lentulo nomphumela eqeda ukuvuvukala. Kodwa omunye zako ezisemqoka ingabe hypoallergenic.
Ibhotela wenza kusukela irayisi bran kuyasiza ukuba ukhiphe ubuthi. Afakwe Ukwakheka Vitamin yayo E kuvimbela umsebenzi free radicals, futhi acid okunamafutha ziwusizo yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi.
zazikujabulela kulo mkhakha ovikelayo, abantu abalwazi kahle ulimi, Lentulo kanye izakhiwo ekuvuseleleni esesikhundleni uwoyela irayisi. Umthelela wokuqala yezimonyo kwalo mkhiqizo walinganiswa abesifazane Japanese. Ziyakwazi bushelelezi ajwayelekile futhi mhlophe umphumela uwoyela irayisi bran. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo kungenziwa kuphekwe okuzenzela inhlanzeko insipho, ngokufanele efanelekayo ukunakekelwa kwesikhumba.
uwoyela Hlanza elayisi ingasetshenziswa hhayi kuphela njengenhlangano yezimonyo ezimele. Kuvame ukungezwa ukubunjwa buso nobusuku okhilimu. It is kahle angena isikhumba ngaphandle kokushiya uphawu kancane okunamafutha.
Lo mkhiqizo ngempumelelo isetshenziswe kuphela ebusweni kodwa nezalo izandla. Ukuze kuqiniswe ipuleti nail ngokucophelela ngokwanele ukuba uhlikihla nge swab ukotini wasigcobhoza ibhotela wenza kusukela irayisi bran.
Ngezenzo wasebenzisa lo mkhiqizo futhi ukubuyisela ubuhle futhi kukhanye izinwele. Ukuze uthole kabusha nezinwele ezinde zawo zezempilo wangaphambili, njalo ngokwanele ukuba agqoke izifihla-buso, kuphekwe iqanda elilodwa isikhuphasha, ababili wezipuni imayonnaise isipuni samafutha irayisi. Ingxube kwaphumela lisetshenziswa izinwele ukuthi analo umphumela qedani e ithawula. Ngemva kwehora elilodwa, imaskhi is zakhukhula ngamanzi afudumele futhi imoto ezivamile.
Nobuhle zokupheka esebenzisa amafutha irayisi bran
Njengoba kushiwo ngenhla, lo mkhiqizo ingxenye zonke izinhlobo izimonyo. Labo abanayo ukuthenga eqolo okhilimu, buso futhi okhathalelayo, angapheka bebodwa. Namuhla, ziningi ekhaya zokupheka, lapho irayisi uwoyela livela.
Ukuze massage iyona engcono ejenti kufanelekile, okulungiselelwe ngesisekelo kwalo mkhiqizo ne ukwengeza i kula peach imigodi.
On the izinwele buthaka singasetshenziswa ngobumnene ubukeka buso. Ukuze ekuwulungiseleleni kudingeka inhlanganisela 10 ml amafutha irayisi yogurt 200ml Engeza iqanda elilodwa isikhuphasha. Ungqimba kwaphumela kumele ukufuthelana 37-38 degrees futhi isetshenziswa izinwele. Ukuze uthole umphumela esiphezulu kungenzeka kutuswa ukugoqa ikhanda lakho nge-polyethylene ne mpahla ithawula. Gcina buso okungenani ibe ihora elilodwa. Emva kwalesi sikhathi, kudingeka ugeze izinwele zakho ngamanzi afudumele futhi imoto njalo kufanelekile izinwele zakho uhlobo.
Abanikazi isikhumba esomile kanye olungaqinile njalo izandla batusa ukuba gcoba it indlela engavamile ehlanganisa uwoyela irayisi bran, ezikhishwe of ziyadliwa kanye Aloe. Lokhu Ukwakheka ezithakazelisayo ungakwazi ukwengeza amaconsi ambalwa lavender futhi bergamot amafutha. Ingxube eqeda kufanele kahle wagcoba ku isikhumba izandla, ungakhohlwa mayelana ngezipikili nomhlane cuticles. Leli thuluzi kuyalithinta isinqandakuvunda, asenze futhi okunomsoco. Labo abafisa ukuba alondoloze izikhwepha nobuhle nail kungenzeka wazi amasonto ambalwa nsuku zonke ukuba uwuhlikihle okumsulwa amafutha abo irayisi bran.
Excellent okunye ebusuku ukhilimu ngabe ukuthengwa mathupha okulungiselelwe ingxube ehlanganisa 20 ml amafutha irayisi, 10 ml Jojoba akhiphe cocoa. Ukunikeza i-ejenti iphunga elimnandi, kungaba wengeze amaconsi ambalwa rose noma Mint ether.
uwoyela Ilayisi: Izibuyekezo
Labo kakade wakwazi sikwazisa lokhu umkhiqizo ewusizo, eqiniseka lwezici zalo ezuzisayo. Omama abaningi abasemakhaya esikhundleni ngempumelelo amafutha abo evamile yemifino. Laba besifazane, ukulifaka indlela yokwakheka izimonyo yasekhaya, bathi akuyona nje amathoni, uyasondla futhi moisturizes isikhumba, kodwa futhi kuqinisa wabuka ebusweni. Abesifazane abaningi bathi khuhla umzimba, uzilungiselele ngesisekelo uwoyela irayisi bran, ungakwazi balahle cellulite, kuvusa kwegazi futhi kuthuthukisa isimo isikhumba.
Ukusebenza Admitad: Izibuyekezo
Ukuqapha okukhethekile kwabathwebuli bezithombe nabadwebi SW2700PT